विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लब १९ औ संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
पोखरा रंगशाला स्थित फुटबल मैदानमा शनिवार भएको उद्घाटन खेलमा एपिएफले आयोजक सहारा क्लब पोखरालाई १-० गोलले हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो । खेलको ८७ औ मिनेटमा आशिष लामाले गोल गर्दै जित दिलाए ।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको पाँचौ मिनेटमा एपिएफका बुद्धिमान राइको क्रस पासमा प्रभिन साङतनले हेडर सहाराका गोलरक्षक दिप कार्कीले बचाउ गरे । छैटौं मिनेटमा सहाराका त्रिदेव गुरुङको पासमा विनोद गुरुङको भली प्रहार बाहिरियो ।
१९ औं मिनेटमा एपिएफले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल गर्नबाट चुक्यो । प्रविन स्याङतानको प्रहार आकाशियो । खेलको २६ औ मिनेटमा श्याम नेपालीको पासमा प्रदिप लामाले क्रस गरेको बल सहराका विदेशी खेलाडी एडमा डुम्विया डेडेले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै जोगाए ।
लगत्तै २७ औ मिनेटमा राजन गुरुङले करिब २५ यार्डबाट गरेको प्रहार फस्टबार नजिकैबाट बाहिरीयो । खेलको ४५ औ मिनेटमा राजनकै प्रहार सहाराका गोलरक्षक दिपले उत्कृष्ट बचाउ गरे । पहिलो हाफमा थप गरिएको अतिरिक्त समयमा प्रदिप लामाले प्रहार गरेको बल निकै बाहिरियो ।
खेलको ४७ औ मिनेटमा एपिएफका डिफेन्डर राजनले बल फुस्काउदा सहाराले गोल गर्ने अवसर पाएपनी सदुपयोग गर्न भने सकेन । सहाराका विनोद गुरुङले त्रिदेवलाई दिएको पासमा गोल गर्न सकेनन् । उनको प्रहार एपिएफका गोलरक्षक राजु नगरकोटीले बचाउ गरे । एपीएफले ५० औ मिनेटमा पाएको कर्नरमा कप्तान सुदिप शिखाकरले प्रहार गरेपनी पोष्ट नजिकैबाट बाहिरीयो । प्रदिप लामाले प्रहार गरेको बललाई जालीको दिशा दिन सकेनन् ।
खेलको ५६ औ मिनेटमा प्रदिप लामाले प्रहार गरेको फ्रीकिकमा आशिष् लामाले ब्याक हेडर गरेको बल सहाराका गोलरक्षकले फुस्काउन पुग्दा कमल थापाले बचाउ गर्दै टोलीका लागि संकट टारे ।
आइतबार मछिन्द्र र एआरएबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चैत २३ गते संकटा र नेपाल आयल निगम मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र चैत २४ गते रुस्लान थ्री स्टार क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चैत २५ र २६ गते सेमिफाइनल र चैत २८ गते फाइनल हुने आयोजक क्लबले जनाएको छ । । प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले गर्नेछन् ।
१९ औं सस्करणलाई सहारा क्लबले पोखराका प्रतिष्ठित उद्योगपती तथा राजनितिककर्मी स्व सूर्य बहादुर केसीको स्मरणमा विशेष बनाउने जनाएको छ । पोखराको फुटबल विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उनको संस्मरणमा विद्यागत पुरस्कारमा १० हजार रुपैयाँले वृद्धि गरिएको बताइएको छ ।
जस अनुसार सुर्यबहादुर के. सी. मेमोरियल उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर , मिडफिल्डर, वेष्ट स्ट्राइकर र प्रशिक्षक अवार्ड रहेका छन् । सबैले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । हरेक खेलको म्यान अफ दी म्याचले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित १० लाख १ हजार र दोस्रो टोलीले ५ लाख १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
सुर्खेतको काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रमा आगलागी